Ciidanka Laanta Socdaalka oo qab qabtay koox Hargeysa ku samaysa Baasaaboor Soomaaliga la mamnuucay | Duul News International
Ciidanka Laanta Socdaalka oo qab qabtay koox Hargeysa ku samaysa Baasaaboor Soomaaliga la mamnuucay	(Duulnews)-Ciidanka Laanta Socdaalka ayaa toddobaadkan qab qabtay laba kooxood oo ahaa Silsilado sameeya Baasaaboorka Somaliga iyo Lacagta Madaw ee Maraykanka, kuwaasoo si qarsoodi ah Magaaladda Hargeysa ugu soo saari jiray. Ciidanku waxay gacanta ku dhigeen Afar qof iyo qalabkii ay ku samayn ayeen Baasaaboorada,
waxaanay u taxaabeen Saldhiga halkaas oo lagu baadhayo kiiskooda, maadaama Somaliland Dalka ka mamnuucday in lagu sameeyo Baasaaboor Somaliga.
Kooxdan ayaa la sheegayaa inay ku shaqayn jireen guri ku yaala xaafadda Siinaay, waxaanay dabagal kadib Booliiska Laanta Socdaalku ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan iyaga iyo qalabkoodiiba. Xildhibaan Nac-nac ayaa la sheegay inuu isku dayey in uu kooxdan ka sii daayo Booliiska hase yeeshee waxa la warinayaa in ay madaxda Booliisku ku gacansaydheen codsigiisa. Booliiska ayaa ku daba jira silsilado kale oo wakiil u ah Somaliya kuwaas oo baasaaboor Somaiga ku sanceeya Hargeysa.
Dhinaca kale-na, Booliisku waxay gacanta ku dhigeen laba Nin oo u dhashay Dalka Nigeria, kuwaas oo sida warku sheegayo lagu qabtay Lacagta Doolarka Madow oo ay maydhayeen, waxaana iyaga iyo qaabkoodiiba loo gudbiyey hay’addaha Amniga. Caasimada Somaliland ee Hargeysa waxa ka socda ganacsi dhinacyo badan leh, kaasoo ay ku dhex jiraan kuwo sharci ahaan mamnuuc ah, waxaana qaarkood gacanta kula jira Ajaaniib kala duwan oo u soo shaqo tagay Dalka, inkasta oo ay Hayadaha Amaanku la socdaan dhaq-dhaqaaqooda, hadana mararka qaarkood waxa soo baxaya inay adeegsanayaan farsamooyin ku cusub Aqoonta ama waayo aragnimada Ciidanka.